🍝၁၀လမ်းထိပ်က (9)လမ်းထိပ် မြိတ်ကတ်ကြေးကိုက်ဆိုင်လေး🍝 – YANGON STYLE
🍝၁၀လမ်းထိပ်က (9)လမ်းထိပ် မြိတ်ကတ်ကြေးကိုက်ဆိုင်လေး🍝
အရင်က ၉လမ်းမှာ စဖွင့်ခဲ့လို့ ခု ၁၀လမ်းထိပ်မှာပါ
♨ကတ်ကြေးကိုက်ကို စာဖူးပေမဲ့ ဒီဆိုင်လေးကတော့ ၃ခါလောက် စားဖူးပြီး ကတ်ကြေးကိုက်ကို ရန်ကုန်နေရာတော်တော်များများမှာ ဝယ်စားလို့ရပေမဲ့ ခံတွင်းတွေ့စေမယ့်အရသာကို နေရာတိုင်းမှာ ဝယ်လို့ မရဘူးဆိုတာ ဒါကိုပြောတာနေမယ်😋😋
🔻ရန်ကုန် မော်တင်နား ညနေပိုင်းလမ်းလျှောက်ရင်း ၁၀လမ်းထိပ်နား ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် (၉)လမ်းထိပ်မြိတ်ကတ်ကြေးကိုက်ဆိုင်လေး ရှိပါတယ်လို့😁 မြိတ်နဲ့ ကတ်ကြေးကိုက်က ခွဲမရလို့ အရသာရှိတဲ့ (၉)လမ်းထိပ်မြိတ်ကတ်ကြေးကိုက်ဆိုင်လေး ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့😋😋
💥ဆိုင်မှာ ရရှိနိုင်တာကတော့ အထူးအနေနဲ့ကတော့ ကတ်ကြေးကိုက်လို့ ဆိုနိုင်ပြီး မြိတ်ထွက်အစားအစာတွေလည်း ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဝက်သားကင်သုပ်၊ မာလာဟင်းတို့လည်း အကောင်းဆုံး လက်ရာတွေနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်😊
ကတ်ကြေးကိုက်ကိုမှ ကြက်သား၊ ဝက်သား၊ ကြက်ဥကြော်၊ ပင်လယ်စာနဲ့ ကြက်သားနဲ့ ပင်လယ်စာ၊ ဝက်သားနဲ့ ပင်လယ်စာလို့လည်း တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ၅၀ဝ၀ကျပ်အောက်တွေကြီးပါပဲ😊
ညနေပိုင်းတွေဆို မြန်မာတစ်ဝက်၊ Foreign တစ်ဝက် စားကြတဲ့ ဆိုင်လေးလို့ ပြောရမယ်။ လက်တောင်မလည်ဘူးရယ်🔥 ကျွမ်းကျင်တဲ့ စာဖိုမှူးတွေရှိလို့ သိပ်တော့ မစောင့်ရဘူး😉😉
ဆိုင်လေးက နည်းနည်းကျဉ်းပေမဲ့ အပြင်မှာလည်း ထိုင်စရာနေရာတွေရှိလို့ မဆိုးဘူး😎
(၉)လမ်းထိပ် မြိတ်ကတ်ကြေးကိုက်ဆိုင်လေးရောက်ခဲ့ရင် မဖြစ်မနေစားသင့်တဲ့ ဟင်းလျာများ💯
✔မာလာပင်လယ်စာခေါက်ဆွဲ (သူကတော့ Menu အသစ်ပါ)
✔မာလာဟင်း (Foreign တွေလာရင် ဒါ အစားများတယ်)
ကတ်ကြေးကိုက်ကိုတော့ Recommand ပေးပါတယ်။ ပါတာတွေကတော့ ဝက်အူချောင်း၊ ပဲပြုတ်နှင့် ပဲပင်ပေါက်၊ ကြက်သား၊ ပုဇွန်နဲ့ မွှေကြော်ပြီး ကြက်ဥကာထားတာလေး😊
မိုးအေးအေးနဲ့ မာလာဟော့ပေါ့ကိုမှ ပင်လယ်စာပေါင်းထည့်ပြီး စားရတဲ့ အရသာကတော့…စားကြည့်သင့်ပါတယ်😋
ဝက်သားကိုပြုတ်ပြီး ကင်ထားတဲ့ အဆီလုံးဝမပါတဲ့ ဝက်သားကင်သုပ်ကို ချဉ်စပ်လေး လုပ်ပေးထားတာကိုမှ နှမ်းလေးဖြူးထားတော့ အရသာရှိချက်ပဲ😱😱
ပဲပြားသုပ်က စားနေကျနဲ့ သိပ်မကွာပေမဲ့ ပဲပြားရဲ့ အရသာဆိမ့်ဆိမ့်လေးက ပိုကောင်းလို့ ဆိုင်ရောက်ရင် စားကြည့်သင့်ပါတယ်😊😊
No. 235, Corner of 10 Street, Lanmadaw Township,Yangon.
Ph no : 09 5174254, 09 795327239
🕢Opening Hours 9:30AM to 9:30PM